उत्साहित देखिएका वामदेव दिक्क भएर आफै पछाडि हटे,सांसद बन्ने योजना चक्नाचुर ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
उत्साहित देखिएका वामदेव दिक्क भएर आफै पछाडि हटे,सांसद बन्ने योजना चक्नाचुर !
प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०७५, शुक्रबार October 12, 2018
काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना भएपछि वामदेव गौतम उपचुनावमाफर्त संसद्मा छिर्ने योजनाबाट पछि हटेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि तीब्र आलोचना भएपछि केही शीर्ष नेता र आफू निकट नेतासँगको परामर्शपछि गौतमले सांसद् बन्ने योजनाबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
उनले सम्भवत शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने छन् । ‘समय, परिस्थिति र भूगोल छनौट पनि उपयुक्त नभएको, चुनावमा लड्ने योजनाले पार्टी र स्वंम वामदेवमाथि आक्रमण तीव्र भएकोले अब उहाँ प्रतिनिधिसभामा जाने विषयमै पुनर्विचारको अवस्थामा पुग्नुभएको छ’, गौतम निकट एक नेताले भने, ‘उहाँले अब वक्तव्यमार्फत आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ।’
सामाजिक सञ्जाल र पार्टीभित्रै गौतमको आालोचना भएको थियो । गौतमका लागि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले पदबाट राजीनामा दिने भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । मानन्धरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गौतमका लागि पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको पत्र बुझाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुग्नका लागि गौतमले पार्टी सांसदलाई राजीनामा गराउने प्रयत्नमा धेरै अघिदेखि लागे पनि सफल भएका थिएनन् । काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले ठाउँ छाड्न तयार भएपछि गौतम निक्कै उत्साहित देखिएका थिए । बुधबारबाट भने उनी काठमाडौं ७ मा चुनाव लडने योजनाबाट हच्किएका छन् ।
गौतमले आफूविरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी गर्ने खेल भएको भन्दै उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्ने योजना त्याग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वमन्त्री केशव स्थापितको घरमा खाना खाएर फर्कने क्रममा दुई सांसदलाई ढुङ्गा प्रहार
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री केशव स्थापितको घरमा भोजन गरेर फर्कने क्रममा प्रदेश सभाका दुई सा‌ंसद चढेको गाडीमा […]
कांग्रेसभित्र फेरि किचलो
काठमाडौं । विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छादारलाई […]
म्याग्दीको तातोपानीमा प्रचण्डको परिवारसहित र गृहमन्त्रीको डुबुल्की !
काठमाडौं । पत्नी सीताको उपचारको क्रममा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल […]
ओली–मोदीबीचको सम्बन्धप्रति भारतमै उठ्यो प्रश्न, कांग्रेस आईको प्रश्नले हँगामा
काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस–आई)ले नरेन्द्र मोदीलाई मात्रै महत्वव नदिन नेपाललाई आग्रह […]